अति भएपछि निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रचण्डले देखाउँदैछन् यस्तो पावर, प्रहरी प्रमुख नै खतरामा! – PathivaraOnline
Home > समाचार > अति भएपछि निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रचण्डले देखाउँदैछन् यस्तो पावर, प्रहरी प्रमुख नै खतरामा!
काठमाडौं। कंचनपुरकी १४ बर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको तर सरकारले अपराधी पत्ता लगाउन नसकेको पनि साढे २ महिना भैसकेको छ। बलात्कार पछि हत्या भएकोमा प्रहरीले सुरुवाति अनुसन्धानको नाममा प्रमाण मेटाउने काम गरेको पुरा विश्वले विभिन्न भिडियो क्लिपहरु मार्फत देखेको छ। प्रहरीले किन र कसकालागि प्रमाण नष्ट गर्ने काम गरेको भन्ने कुरा पनि जनताहरुको चाँसोको बिषय हुन गएको छ।
यसैक्रममा प्रहरी माहानिरिक्षक मात्र होईन गृहमन्त्रीको बर्खास्तीको प्रसंगहरु पनि उठिरहेको बताईएको छ। गृहमन्त्रीले पनि धेरै बोलेको तर काम केही नगरेर सरकारको साख गिराएको आरोप पार्टीका नेताहरु शिर्ष नेताहरुलाई नियमित लगाईरहने स्रोतले जनाएको छ। निर्मला हत्याबारे चाहिँदो नचाहिँदो जवाफ दिएकै कारण गत बिहीबार संसदमै उनको राजीनामा मागिएको थियो ।